नायिका भन्दा सुन्दर तेस्रोलिंगी भन्छिन : केटा हुदा आफ्ना यौ’ नको चाहना पुरा गर्न पाउदिनथे तर अहिले … – List Khabar
Home / रोचक / नायिका भन्दा सुन्दर तेस्रोलिंगी भन्छिन : केटा हुदा आफ्ना यौ’ नको चाहना पुरा गर्न पाउदिनथे तर अहिले …
नायिका भन्दा सुन्दर तेस्रोलिंगी भन्छिन : केटा हुदा आफ्ना यौ’ नको चाहना पुरा गर्न पाउदिनथे तर अहिले …
admin October 14, 2021 रोचक Leaveacomment 282 Views
अचम्मको संयोगः शनिको प्रिय राशिमा बनिरहेको छ पञ्चग्रही योग, यी ३ राशिलाई सेयर र व्यापारमा लाभ हुने
यी ३ राशिको हुन्छ छिट्टै विवाह !
पुरुष हुँदा मैले आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरु पुरा गर्न पाउन्नथे । मलाई चाहना हुँदा पार्टनर पाउन्नथे । अहिले महिला भएको छु म खुसी छु । म मेरा इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न पाएको छु । थर्ड जेन्डर बनेकी यिनी अन्य सामान्य युवती भन्दा सुन्दर देखिन्छिन् । आफुले पाएको यो प्राकृतिक देनवाट ब्यक्तिगत रुपमा खुसी भएपनि परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएका कारण कहिले काँही भने नराम्रो लाग्ने उनको भनाई छ ।
सिल्पन विष्ट नाम बताउने यिनले करिब २० वर्ष पुरुषको जीवन बिताइसकिन् । अहिले ४ वर्ष यता महिलाको स्वरुपमा छन् । अहिले आएर महिला र पुरुष दुवै बन्न निकै कठिन भएको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, जतिबेला म पुरुष थिए त्यतीबेला परिवार समाज, आफन्त र साथीभाई सबैको माया पाएकै थिए । तर त्यतीबेला आत्मसन्तुष्टि थिएन । अरुका लागि बाँचेकी थिए ।
अहिले महिलाको स्वरुपमा आएपछि आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ तर परिवार, आफन्त र समाजको साथ छैन । उनको कुराले परिवारवाट उनले साथ नपाएको बताइन् । प्राकृतिक रुपमा महिलाकै स्वरुप र ब्यवहार दिएर जन्मिएकाहरुलाई जसरी समाज र परिवारले स्वीकार गर्छ तर प्राकृतिक रुपमा हेर्दा एउटा स्वरुप तर भित्रि ब्यवहार फरक स्वरुपको दिँदा निकै कठिन हुने उनको भनाई छ ।
थर्ड जेन्डर भन्दा आफुलाई कुनै दुख नलाग्ने भएपनि छक्का भनेर बोलाउँदा भने नराम्रो लाग्ने बताउँछिन् । सबै थर्ड जेन्डरले शरिरकै ब्यवसाय गर्छन भन्ने आम सोचाई निकै गलत भएको उनको भनाई छ । तेस्रो लिंगीमात्र त्यस्ता काममा हुँदैनन् मैले थुप्रै त्यस्ता महिला पुरुष देखेकी छु जसले शरीर बेचेका छन् ।
Previous आफैले जन्माएको छोराहरुलाई पाल्न सक्छस् भने पाल सक्दिनस् भने छतमा लगेर त ल झा’रिदे भन्दै श्रीमानले भने पछी श्रीमतीले गरिन देह त्यागको प्रयास !
Next नेपाल साफको इतिहासमै पहिलोपटक फाइनलमा, प्रशिक्षक अलमुताइरीले साफपछि पदत्याग गर्ने
भगवानका पालादेखिको तथ्य: महिला र पुरुषको मिलनमा कसलाई बढी आनन्द लाग्छ ? महिला र पुरुषको …